Detox: Khuraafaadka iyo Xaqiiqda - Dib-u-Celinta Fudud
Home » blog » Detox: Maadadaha iyo Xaqiiqooyinka
Isticmaalka qolka kuleylka, ama sauna, si kor loogu qaado dhididku waxay kaa caawineysaa in aad si xoog ah u yareeyso joogitaanka sunta ee jirkaaga. Mid ka mid ah hababka dabiiciga ah ee jidhkaaga ee wax lagu nadiifiyo, ayaa ah xagal (dhidid). Si kastaba ha noqotee, qiimaha raadadka kaliya (1% ama ka yar) ee sunta ku jirta jidhkaaga ayaa laga saarayaa habkan. Saunas iyo qolalka uumiga ah ee faa'iidooyinka muhiimka ah ayaa ka caawinaya dheef-shiid kiimikaad, sida dhididku waa xeer-ilaaliye muhiim ah.
Isticmaalka qolka kuleylka, ama saunada, waxay kaa fureysaa maqaarkaaga maqaarkaaga oo kuu ogolaanaya in wax-qabad aad u sii fiicnaan leh loo mariyo dhididkaaga. Dhamaan walxaha sunta ah lagama saari karo habkan, iyo marka ay ku jiraan natiijooyinka maqaarka muuqda ee maqaarkaaga; inflammations, finan, ama rush tusaale ahaan. Qoyaanka dheeriga ah ee qolka kuleylka ah ayaa ka hortagaya dhididkaaga uumiga, ka caawinta isu dheellitirka maqaarka maqaarka ee maqaarka, taasoo macnaheedu yahay finan ama maqaarka maqaarka. Ka dib markaad shaqeyneyso, gaar ahaan, isticmaalka sauna, ama qolka kuleylka, si aad ah ayey uga nadiifisaa nadiifinta iyo nadiifinta indhahaaga.
Qiimaha cuntada Detoxka waxaa ku jira maalgalin maaliyadeed oo weyn oo ku saabsan qaybtaada, iyo sidoo kale in si xad dhaaf ah loo xaddido. Cuntada loo naqshadeeyey si ay uga caawiso in ay wax ka qabato jirkaaga waxay noqon kartaa mid xakameyn karta markaad rabto inaad noqoto. Waxaa haboon in la ogaado, in cunno badan oo xaddidan, ay sii adkaan karto inay kugu adkaato.
Cuntada Deto waxay si sahal ah ugu dhex dari kartaa cuntooyinka maqalka ah haddii ay ku jiraan maaddooyinka saxda ah, sida noocyada kale ee waxtarka kale ee waxtar leh. Khudaarta cagaaran, miraha liinta, iyo miraha waa tusaalooyinka cuntooyinka raqiis ah oo wax ku ool ah cuntada diiriga ah. Ku darida shaahaaga cagaarka ah ee cuntadaada ayaa sidoo kale ku habboon in lagu xoojiyo jirkaaga.
Nafaqada cuncunka ayaa ah habka ugu dhaqsaha badan ee waxtarka leh ee aad u isticmaali kartid inaad miisaanka dhinto. Hadda waa run in marka laga bilaabo cunto karinta cuntada, waxaa laga yaabaa in aad la kulanto miisaan aad u deg deg ah oo la dareemi karo. Si kastaba ha noqotee, marka la dhammeeyo noocyadan noocaan ah, miisaanka khasaaro caadi ahaan waa la soo celiyaa. Tani waa sababta oo ah miisaanku badanaa waa miisaanka biyaha. Cuntada xayawaanka ee dheeraadka ah oo aan lahayn jimicsi ayaa sidoo kale keena miisaan lumis ah, murqo lumis ah.
Cunto oo ku jirta qaybo ka mid ah cuntooyinka kor u kaca ah ee cuntada lagu kariyo oo ay weheliso jimicsi joogta ah ayaa ah habka ugu habboon ee miisaanka lumay. Isticmaalidda caawiyayaasha dheef-shiid kiimikaadka ah sida cunnada detox iyo cabitaanka (sida shaaha cagaaran) waxay kordhisaa waxtarka jirka ee jirka. Miisaanka macnaha waxaa lumaya wax yar ka dhaqso badan caadiga; iyo sidoo kale hubinta miisaanka ayaa u badan tahay inay joogaan, iyo musqusha aan lumin.
Waxaad dareemi doontaa miiraad, daal badan ama aan fiicneyn inta lagu guda jiro dhamaan dawooyinkaaga. Maaha wax aan caadi ahayn in la dareemo in uu hoos u dhaco maalmaha bilowga ah ka dib marka uu bilaabo astaamaha. Sababtoo ah tani waa mudada ay jirkaaga u habaynayso ilaha tamarta cusub, marka la isku dayayo in uu soo saaro sunta. Haddii dareenkan uu sii socdo, waxaa muhiim ah inaad joojiso oo dib u qiimeyso waxa ku jira daawada dabka.
Kadib marxaladda bilawga ah ee dawada dabka, oo aad dareentid daal, oo laga yaabo inay jiran tahay, waa in aad dareentid inaad dareentid fiicnaan ka hor intaanad bilaabin. Dadku waxay sida caadiga ah dareemaan inay heystaan ​​tamar badan, oo aaney dhicin. Sidoo kale ma aha wax aan caadi ahayn si aad u hesho hurdo tayo fiican leh natiijo ahaan.
Nadiifinta casiirku waa siyaabo lagu kalsoonaan karo oo wax looga qaban karo jirka. By cunista cunnooyin ka kooban kaliya casiir ah (dukaanka iibsan ama guriga), waxaad ku gubi kartaa iyada oo dukaanka tamarta jirka iyada oo aan la buuxin. Fitam la'aan la'aanta noocan oo kale ah waxay keeni kartaa calool-galinta.
Juices waa in loo isticmaalo iyada oo lala xiriirinayo cuntooyin fara badan oo nadiif ah; si looga hortago dabka iyo calool-galinta, iyadoo la kordhinayo faa'idooyinka mustaqbalka. Waxaa lagu talinayaa in casiir loo isticmaalo sida beddelidda cunto fudud, ama cunto, halkii aad ka dhigi lahayd guud ahaan cuntadaada. Maadaama ay yihiin kaloori hooseeya, ikhtiyaar caafimaad leh oo ku filan nafaqooyinka qaarkood.
Badanaa sii kordhinta qaadashada biyahaagu wuxuu kaa caawinayaa in aad iska ilaaliso sunta jirka. Inkastoo biyaha la cabo iyo in la sii daayo biyaha la cabbo ayaa muhiim ah, labadaba markaad joogtid iyo markaad ku sugnayn dawada, sida wax kasta oo aad u badan, waxay noqon kartaa waxyeello. Isticmaalka biyaha xad-dhaafka ahi wuxuu keeni karaa dareen xanuun, jaahwareer, iyo madax xanuun badan.
Biyaha waxay ka caawisaa sidii loo joojin lahaa iyo u saari lahaa alaabta qashinka ee habka dheef-shiidkaaga. Sidaas ayaa gacan ka geysan karta dib u soo celinta sunta iyo alaabada qashinka ku jirta xuubkaaga. Hase yeeshee, faa'idada ugu muhiimsan, waa in kor u qaadida biyahaagu uu soo saaro dheef-shiid kiimikaad sarreeya, kor u qaadida hawlaha jirka ee waxtar leh (oo ay ku jiraan waxyeelaynta dabiiciga ah).
Boostadaas waxaa bixiyay Sam Socorro Dukaanka Duufaanta, Sam waa qoraa khabiir ah oo ku saabsan caafimaadka iyo fayaqabka, waxaana uu qoraayo iyo mawduucyada sida sidan oo kale ah oo loogu talagalay sannadihii 10.